Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/08/2020)
Njem a na-ahụ a buru ibu swath nke Italy, dị ka ọ na-ewe gị site na Milan ụzọ niile ka n'ọnụ nke mba buut. N'ụzọ ị ga-enweta azịza ndị dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri na ugwu nta nke Tuscany. Nke a bụ, n'ezie, na mgbakwunye na akpụrụ akpụ nke Rome na akụkọ ya.
Nke abụọ anyị ghota maka kacha mma sleeper ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ onye na-agba ọsọ site na Zurich, Switzerland na Hamburg, Germany. If you’re looking for a sleeper train service, ị ga-chọrọ tụlee Nightjet. Ezie na e nwere ọtụtụ n'akwụsịghị akwụsị nhọrọ maka nke a ụgbọ okporo ígwè, nwere ike ị chọrọ tụlee aga via a ụzọ na-enye gị na-agbanwe. Obodo mara mma, na ụgbọ oloko pụtara ọtụtụ obere obodo n'ụzọ, tinyere obodo Hanover. Obodo ndia na-ọma uru a na-akwụsị na gị na njem ma ọ bụrụ na ị nwere oge. Echefula ihe ahụ ikpọ echiche nke Alps ị ga-enwe ike ịnweta ma.
ọbụna ka mma, ozugbo ị na-mere ụzọ gị Hamburg na ị na-a obere anya si Berlin. Isi obodo German nke ugbu a bụ maka ama n'ụlọ ịgba ọkpọ ya na ịrara onwe ya nye ọdịbendị hipster. Nwee obi ụtọ na nka na nnukwu kọfị ka ị na-atụgharị uche fọdụụrụ nke mgbidi Berlin.
Nke a ma ama nsochi usoro na-agba ugboro isii kwa izu. Na-akpọkwa Caledonia sleeper, a sleeper ọrụ mixes okomoko na-eri irè. Ị nwere ike ịchọta amụọ na gụnyere nri, ọṅụṅụ, na N'ezie, ụlọ ịrahụ ụra.
kwesịrị nsọpụrụ aha 6: Copenhagen To Berlin
Mgbe ị gaghị ahụ zuru ehi ụra berths a ụgbọ okporo ígwè, ga ahụ ụzọ njem abalị dị kwa ụbọchị. Ndị a ga-ekwe ka ị na-ahapụ n'abalị na-abata ụtụtụ nwee ume n'ihi na ụbọchị na-abịa. N'ihi na nke kacha mma na ahụmahụ na a na-abụghị sleeper ụgbọ okporo, ị ga-achọ idobe tiketi klas nke mbụ. Ndị a tiketi na-abịa na ụba elele dị ka mmezi ibu, gụnyere nri, na ahụmịhe ụlọ ndị ọzọ.
Mgbe ị na-eme njem na njem Bygbọ okporo ígwè Europe i ghapula onwe gi n'ihọrọ. Ma ọ bụ na Scotland ma ọ bụ Spain, Norway, ma ọ bụ Sweden, sleeper ụgbọ oloko na-ụfọdụ ndị kasị mma ọrụ gburugburu abịa n'ututu nwee ume na njikere maka ụbọchị gị na-abịa. Mgbe i nwere a plethora nke nhọrọ dị ka ị na-, dị ka ụlọ ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ndị na-ehi ụra abalị na-anya Prague, Poland, Lisbon ma ọ bụ ọbụna Moscow, ime onwe gị a amara na iti ndị a na isii n'elu sleeper ụgbọ oloko na Europe kama. Ị ga-abụ ndo!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top 6 Ndị na-ehi ụra n'ụra na Europe maka Njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#nighttrain Njem Europe NightTrains SleeperTrains Train Travel